Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram | Ozi ECommerce
Encarni Arcoya | | elekọta mmadụ media
Anyị nwere ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta ugbu a. Kedu ihe ma ọ bụrụ Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ... Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye nkeonwe, ị nwere ike ị gaghị enwe ike ịme ha niile, ị ga-ebu ụzọ bute ụfọdụ ụzọ ma kpochapụ ndị ọzọ. Mana otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ ya, ma ọ bụ nwa oge, na-adịgide adịgide, idobe onyonyo, wdg. ebe a ị ga-ahụ azịza na ndị nduzi ị chọrọ ime ya. Gaa maka ya!
1 Kedu ihe bụ Instagram na ihe kpatara ihichapụ ya
2 Hichapụ akaụntụ Instagram, otu esi eme ya?
2.1 Hichapụ akaụntụ Instagram nwa oge
2.2 Hichapụ akaụntụ Instagram kpamkpam
3 Otu esi emegharị akaụntụ gị
4 Ọ ka mma ikpochapụ nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide?
Kedu ihe bụ Instagram na ihe kpatara ihichapụ ya
Instagram bụ nke Facebook, nke a na-akpọ Meta ugbu a, dịka ọ na-eme na WhatsApp ma ọ bụ na netwọk mmekọrịta nyere ụlọ ọrụ aha ya, Facebook.
Na mbụ a mụrụ ya ka ya na Pinterest mpi, ya bụ, ọ bụ netwọk mmekọrịta nke ihe oyiyi. Otú ọ dị, ka oge na-aga, ọ kwadoro ma jisie ike dọta nnukwu ndị na-ege ntị ike gwụrụ Facebook wee hụ na Instagram ụzọ ka mma iji ruo ndị ahịa ma ọ bụ ndị enyi.
Ugbu a ha na-ebikọ ọnụ (n'ezie, ime ọtụtụ ihe na Instagram chọrọ akaụntụ Facebook) mana gịnị kpatara ihichapụ ya?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ihichapụ akaụntụ:
Gịnị kpatara na ị naghị eji ya. Ọ bụrụ na ọ na-aga ogologo oge n'ejighị ya, n'ikpeazụ mmekọrịta gị na ndị ị nwere dị ka ndị enyi na-efunahụ ya, nke ahụ pụtara na, ọ bụrụgodị na ị weghachi ya, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa.
N'ihi na ị chọrọ ịgbanwe style. Were ya na ị nwere akaụntụ Instagram maka azụmahịa Social Media gị. Mana i kpebiela na ị ga-arara onwe gị nye SEO. Ọ ka mma iwepụ akara nke azụmahịa ochie gị wee mepee nke ọhụrụ ka i wee lekwasị anya na ọrụ ọhụrụ ahụ site na mmalite.
N'ihi na ike gwụrụ gị. Netwọk mmekọrịta na-agwụ ike. Ọtụtụ. Ya mere enwere oge mgbe ị ga-achọ ịkwụsị kpamkpam.
Ọzọ anyị ga-enye gị usoro nke ụzọ dị iche iche dị iji ihichapụ akaụntụ Instagram.
Hichapụ akaụntụ Instagram, otu esi eme ya?
Ihe mbụ ị ga-amata bụ na ọ dị mfe ịdebanye aha, ya bụ, ịdebanye aha na Instagram. Ma a bịa n'ịhapụ ya nwere ike ịbụ nnukwu isi ọwụwa. Ya mere, ọ kacha mma iburu n'uche mkpebi ị chọrọ ime.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsịtụ obere oge, ị nwere ike ime ya site na ihichapụ akaụntụ Instagram gị nwa oge. Kedu ihe na-eme otu a? Ọ dị mma, ị gaghị apụta na netwọkụ ahụ, ọbụlagodi na ha na-achọ gị, mana a ga-echekwa ihe niile ị nwere na profaịlụ gị. Naanị, maka ụwa ndị ọzọ, ị na-ezoro ezo.
Ị chọrọ ịla n'iyi kpamkpam? I nwekwara ike ime ya, naanị na nke a, foto, nkọwa, akụkọ, vidiyo ... ga-apụ n'anya kpamkpam. Gụnyere aha njirimara.
Hichapụ akaụntụ Instagram nwa oge
Ị maara na ihichapụ akaụntụ Instagram ị chọrọ kọmputa? N'ezie, ịnweghị ike iji mkpanaka gị mee ya, mana ị ga-enwerịrị ihe nchọgharị desktọpụ (ma ọ bụ mee ka otu na mkpanaka gị nwee ike). Ihe doro anya bụ na site na ngwa n'onwe ya ị gaghị enwe ike ime ya.
Ị ga-abanye na webụsaịtị a: 'https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary'.
N'ebe ahụ, ị ​​ga-akọwapụta ihe mere ịchọrọ iji gbanyụọ akaụntụ gị na ị ga-etinyerịrị paswọọdụ gị iji chọpụta na ọ bụ gị chọrọ n'ezie ime ya. N'oge ahụ, profaịlụ gị ga-enwe nkwarụ.
Ya bụ, ọ dịghị onye ga-ahụ ma ọ bụ hụ foto, kwuru ... na ị biputere tupu gbanyụọ gị akaụntụ.
Ọ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịla ezumike na netwọk mmekọrịta n'enweghị onye ọ bụla nwere nsogbu.
Hichapụ akaụntụ Instagram kpamkpam
Ọ bụrụ na i meela mkpebi ịkwụsị akaụntụ gị kpamkpam na Instagram, wee tufuo ihe niile dị na ya, yabụ ị ga-aga url a 'https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/'.
N'ime ya ị ga-ehichapụ akaụntụ gị kpamkpam na ruo mgbe ebighị ebi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, foto, vidiyo, ma ọ bụ mmekọrịta ị mebere agaghị adị. Ọbụghị ọbụna aha njirimara gị. Ọ ga-adị ka a ga-asị na ị nọtụbeghị na Instagram.
Mgbe ị banyere na ibe ahụ, ọ ga-ajụ gị, ọ bụrụ na ibanyebeghị, ka ị tinye aha njirimara na paswọọdụ gị. Ozugbo ịmechara, ọ ga-agwa gị ka ị gwa ya ihe kpatara ịchọrọ ịkwụsị akaụntụ gị.
Ọ ga-ajụ gị maka paswọọdụ gị ọzọ na bọtịnụ uhie ga-apụta. Ọ bụrụ na ị pịa ya, ị ga-ehichapụ akaụntụ gị kpamkpam ma ọ nweghị ụzọ ị ga-esi nwetaghachi ya. Chee echiche, ọ bụghị ozugbo dị ka i nwere ike iche. N'ezie, ọ ga-enye gị oge nke ụbọchị ole na ole. Ọ bụrụ n'oge ahụ ịbanye na akaụntụ gị, ihichapụ ikpeazụ ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, mgbe ahụ ị ga-amalite usoro niile ọzọ iji mee ya.
Ọ bụ mkpuchi ma ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị ụbọchị ole na ole ka e mesịrị ma achọghị ihichapụ ọrụ niile ị nwere ike ịrụ na akaụntụ ahụ.
Otu esi emegharị akaụntụ gị
N'ihe gbasara ihichapụ na-adịgide adịgide, ọ nweghị ụzọ isi megharịa akaụntụ ahụ, n'ihi na ọ nweghị akaụntụ dị n'ezie. Mana ịnwere ike ịmegharị ya mgbe ị wepụrụ ya nwa oge.
Mana kedu ka esi eme ọzọ? N'okwu a, ụzọ isi mee ka ọ rụọ ọrụ bụ site na ịbanye, ma ọ bụ na kọmputa ma ọ bụ na ngwa mkpanaka. Site na nke ahụ, ị ​​nwere ike na-arụ ọrụ ọzọ.
N'ezie, ọ bụrụ na ihichapụ ya nwa oge na mgbe 10 nkeji, ma ọ bụ otu awa, ị chọrọ naghachi ya, ọ gaghị ekwe omume; Ọ dị mkpa ịnye awa ole na ole ka usoro ahụ rụọ ọrụ ma kwe ka ị banye na akaụntụ gị.
Ọ ka mma ikpochapụ nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide?
N'okwu a, anyị enweghị ike ịgwa gị nke ka mma n'ime ha abụọ n'ihi na ọ ga-adabere na ebumnuche ị nwere. Ọ bụrụ na ị kpebiela ịhapụ Instagram n'ihi na ike gwụrụ gị, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche iji jide onye ọrụ na-efunarị ya n'ihi na ị nwere ike ịchọrọ ịlaghachi n'oge ọ bụla. Ma, n'adịghị ka netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ, Instagram anaghị ehichapụ profaịlụ ọ bụrụgodị na ọ na-eji ọnwa na ọnwa ehichapụ nwa oge.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị kpebie ihichapụ ya, ma ọ bụ n'ihi na ịgaghị abanye na ya ọzọ, n'ihi na ịchọghị ịga n'ihu na akaụntụ ahụ, wdg. Ihe kachasị mma ga-abụ ihichapụ ya, ikekwe site na ịmepụta ndabere nke profaịlụ gị ka ị ghara idafu vidiyo na ihe oyiyi) wee gbochie ọdịnaya ahụ ịbanye na nchekwa data Meta.
Ị ehichapụla akaụntụ Instagram gị? Ọ dị mfe ime ya wee laghachi mgbe obere oge gasịrị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » elekọta mmadụ media » Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram
Gịnị bụ ọdịnaya ahịa